Maraoka ‘Varavaran’i Hollywood Mankany Amin’ny Tany Hay’, Fa Tsy Izay Ihany · Global Voices teny Malagasy
Maraoka ‘Varavaran'i Hollywood Mankany Amin'ny Tany Hay’, Fa Tsy Izay Ihany
Voadika ny 04 Oktobra 2016 4:46 GMT
Toerana Atlas, ao Ouarzazate. Sary nalain'i Andrzej Wójtowicz tamin'ny 2 Mey 2013. Loharanon-tsary: Flickr.
Iray amin'ireo toerana fanaovana horonantsarimihetsika malaza indrindra manerantany i Maraoka, ka maro ireo mpamokatra sarimihetsika iraisampirenena no naka sary tao hanaovana ny sarimihetsika malaza nataon'izy ireo. Ny tanànan'i Ouarzazate, midika hoe “tsy misy tabataba” amin'ny fiteny Amazigh (Beribera), no nahomby indrindra tamin'ny fisarihana mpamokatra sarimihetsika.
Anisan'ireo sarimihetsika notontosaina tao Ouarzazate ny Prince of Persia,” [Printsin'i Persia] notarihan'i Mike Newell, “The Way Back” [Ny Lalana Mody] notontosain'i Peter Weir, “Mission Impossible” [Iraka Tsy Vita Tanterahina] avy amin'i Brian De Palma, “Asterix & Obelix: Mission Cleopatre” [Asterix sy Obelix: Iraka Cleopatre] novokarin'i Alain Chabat, “Babel” notontosain'i Alejandro G. Iñárritu, ary ny “Gladiator” novokarin'i Ridley Scott. Nampalaza an'i Ouarzazate ho “Hollywood-n'i Maraoka” izany.
Ny toerana tena mahasarika ao Ouarzazate dia ny Studio Atlas. Iray amin'ireo toerana lehibe indrindra fanaovana sarimihetsika manerantany izay manana velarana an-tany efitra 20 hekitara, naorina tamin'ny taona 1983. Voahodidina tsangambaton'i Farao avo tsanganana, manao satroka volamena (izay asongadina toy ny fitaovana fanampiny amin'ny filma maro) ny fidirana ao.
namoaka ny sarin'ny fitsidihany an'i Ouarzazate vao haingana tao amin'ny YouTube i Hjalmar Gerbig, Bilaogeran'ny fitsidihana firenena, .
Saingy manoatra lavitra noho ny hantsaratarehin'ny endrintaniny ny antson'i Ouarzazate. Tombontsoa iray hafa ho an'ny vahiny ny fahamoran'ny fihariana ao an-tanàna. Mora mahita ekipa ara-teknika voahofana eo an-toerana sady mahafehy teny maro, tahaka ny teny Anglisy, Beribera, Espaniola, Frantsay, Arabo ary Paortiogey ireo mpamokatra sarimihetsika. Ary satria mora kokoa ny vidim-piainana ao Maraoka, dia ny antsasaky ny teti-bola lany amin'ny fanatontosana sarimihetsika lehibe ao Etazonia na Eoropa ihany no lanin'ireo mpamokatra sarimihetsika.
Araka ny fanazavan'ny tranonkalan'ny Studio:
Heverina toy ny “Hollywood Maraokana”, manome endrika ivelany tena mahavariana tahaka ny tany lonaka anivon-tany hay, Kasbahs, lohasaha, tendrombohitra sy dongom-pasika hamokarana sarimihetsika i Quarzazate.
Hita ao Ouarzazate ny seranam-piaramanidina iraisampirenena, fotodrafitrasa ara-pahasalamana mahomby, trano fandraisam-bahiny amin'ny sokajy isan-karazany, ary toerana fanaovana sarimihetsika manaraka ny fenitra iraisampirenena izay ahitana endrin-toerana sy trano isankarazany : Romanina, Ejipsianina, sns
Noho ireo fitifirana fakana sary maro notontosaina tao Ouarzazate, dia nivelatra tao ny mpiasa mahay sy mampidi-bola ara-teknika miaraka amin'ny vahoaka ahitana foko azo atao mpiantsehatra, orinasa mpamatsy tolotra ao an-toerana, mpamatsy fitaterana sy sakafo isan-karazany, ary misy teknisianina hatrany ao Ouarzazate.
Manana mozean'ny sarimihetsika mihitsy aza ny tanàna, misy ireo fitaovana maromaro sisa tavela tamin'ny fakana sary, sy sombin-tsarimihetsika notontosaina tao tahaka ny “Lawrence of Arabia” sy ny “Kundun” ary andiana tantara taloha tamin'ny sarimihetsika hafa. Azo tsidihana ahitana ny ao anatiny mitopy volamena sy ireo sarivongana Bodista ny trano Tibetana hita ao amin'ny “Kundun”. Hita ao ihany koa ny sambo mpitondra andevo hita ao amin'ny “Ben Hora”, miaraka amin'ny tadiny, dabilio hazo, sy valin-drihana vita hazo.
Fandravahana Ejipsianina fahiny naorina ao amin'ny Atlas Studio ao Ouarzazate. Nopihan'i Andrzej Wójtowicz tamin'ny 2 Mey 2013. Loharanon-tsary: Flickr.
Tahaka izao no nolazain'ilay bilaogera momba ny fitsidihana firenena, Aizzing taorian'ny fitsidihany an'i Ouarzazate sy ny toerany fanaovana sarimihetsika:
Traikefa tsy mampino izany amin'ny ankapobeny. Tsy isanandro ianao no mahazo fahafahana hiaina indray ny fotoana amin'ny andian-tantara nankafizinao tamin'ny fahitalavitra. Mahatalanjona sy mihoatra ny tena izy ny fahitana ny toerana tena izy nanaovan'i Emilia Clarke sy Peter Dinklage horonantsary ary anisan'ny toerana fitsidihana nofisinao ihany koa. Tena [mahalasa] adala sy mahafinaritra! Tsy manoro hevitra izany ho an'ireo malemy lohalika sy manana olana momba ny vanin-taolana aho, fa raha mpankafy loatra ny Gladiator sy ny Game of Thrones ianao izay tia mandeha toerana manan-tantara, dia i Benhaddou ao Ouarzazate no toerana tokony alehanao.
Saingy ankoatra ny maha fialofan'ireo tale sy mpamokatra sarimihetsika manerana izao tontolo izao, dia manohitra hatrany ny endrik'i Maraoka sy ny Tontolo Arabo Ankapobeny amin'ny sarimihetsika Hollywood ireo mpamokatra sarimihetsika sy ny mpikatroka ao Maraoka. Araka ny nolazain’ ilay mpanao gazety iray ao amin'ny Guardian vao tsy ela akory hoe “diso fanantenana ny sasany mahita ny firenen'izy ireo aseho matetika toy ny faritra an'ady, ary milaza ny hafa fa ataon'ny sarimihetsika Amerikana ampihimamba ny talenta ao an-toerana.”
Nilaza ao amin'ny Guardian i Karim Aitouma, mpamokatra fanadihadiana vaovao momba ireo olona fandravahana sarimihetsika matetika ampiasaina ao Ouarzazate fa mampitombo isa ireo “be volombava matihanina” hisarihana mpanatrika Tandrefana ny olona fandravahana sarimihetsika:
Rehefa fantatr'izy ireo fa hoavy ny sarimihetsika Hollywood iray, dia avelan'izy ireo hihalava ny volombavany. Fepetra lehibe amin'ny fifantenana mpiantsehatra (castings) izany – hanaovana filma manan-tantara sy hilalaovan'izy ireo amin'ny filma mpampihorohoro. Manana volombava izy rehetra amin'ny fotoana rehetra, tsy hoe satria fanirian'izy ireo izany fa noho izy ireo miandry ny fifantenana.
Mihevitra ilay Maraokana mpamokatra sarimihetsika Othmane Naciri fa tsy dia mahafantatra firy momba ny fireneny ireo mpamokatra sarimihetsika avy ao Hollywood, araka ny nohazavainy tamin'ny antsafa miaraka amin'ny PRI hoe:
Eny, Maraoka, aiza izany? Afrika Avaratra? Fasika, tany efitra? Eny, lavorary izany. Mora vidy kokoa ho anay ny mitifitra sary ao noho ny mitifitra sary ao amin'ny tany efitra Arizona ary azo antoka kokoa ny mitifitra sary ao noho ny ao tena any Irak ka marimaritra iraisana tsara indrindra izany.
Natao mifanendrika amin'ny Arabo mahazatra ny vahoaka Maraokana: mpampihorohoro, olona maditra, araka ny fijerin'ny Amerikana. Hitanao fa tsy dia lavitry ny fomba fijerin'ny tandrefana tamin'ny taompolo 50 izahay – misy ny tsara, ny ratsy ary ny mpanao ratsy!
Nitantara ny olana ilay mpanao gazety Mohamed Koné ary nofintininy fa ireo Maraokana tenany mpamokatra sarimihetsika mihitsy no manohitra ny tantara, efa fahombiazana kely izany.
Miezaka manohitra ny sary mpampihorohoro ireo mpamokatra sarimihetsika Maraokana amin'ny alalan'ny fanondranana ny endriky ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Efa misy sahady ny fankasitrahana voalohany, tafiditra ao amin'ny fetiben'i Cannes ireo sarimihetsika Maraokana vao haingana izay.